मौरीको मह खाँदा कस्ता कस्ता कुरामा फाइदा पुग्दछन् ? | सुदुरपश्चिम खबर
मौरीहरूले विभिन्न प्रजातिका वनस्पति –जडिबुटीसहित) हरूको फूलमा भएको रसलाई सङ्कलन गरी तयार पार्ने तरल वस्तुलाई मह भनिन्छ । फरक मौसममा फरकफरक प्रकृतिका वनस्पतिहरू फुल्ने हुनाले महको रङ र स्वाद पनि फरकफरक प्रकृतिको नै हुन्छन् ।
जस्तै, जाडो मौसममा फुल्ने तोरी वा च्यूरीको फूलबाट तयार भएको मह जमेर सेतो रङ देखिन्छ । ह्प्तामा दुई–तीनपटक महको प्रयोग गरेर दाँत माझ्न लगाउने हो भने दाँतमा चमक आउने र स्वस्थ हुने गर्दछ । नुहाउँदा पनि सकेसम्म निम र मह दुई–तीन थोपा प्रयोग गर्न सके यसले शरीरलाई ज्यादै राम्रो गर्दछ ।
बकाइनोको फूलको रस आधा चम्चामा मह आधा चम्चा मिसाएर बिहान÷बेलुका खाने गरेका धर्म रोकिएको खुल्छ र नियमित हुन्छ ।
एक चिम्टी मरिचको धूलो आधा चम्चा जीराको धूलो, एक चम्चा महमा फिटेर बिहान–बेलुका केही दिन खान दिएमा पनि अल्काई ठीक हुँदै जान्छ । (urlabarinews.com बाट सभार)
औषधीय गुण बोकेको हुन्छ पालुंगो सागले, जान्नुहोस् यसको फाइदाबारे !!